कोभिडले बन्द सम्पदा संरक्षणमा ध्यान दिऔँ | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
कोभिडले बन्द सम्पदा संरक्षणमा ध्यान दिऔँ
Published On : २४ आश्विन २०७७, शनिबार ११:३१
सयौँ विद्यार्थी आउने गोरखा संग्रहालय अहिले सुनसान छ । गोरखा संग्रहालयमा यतिवेला भ्रमण आउने विद्यार्थी खचाखच हुन्थे । गोरखा सदरमुकामको साँघुरो बसपार्कमा गाडी पार्किङको समस्या हुन्थ्यो । तर चैत दोस्रो सातादेखि बन्द संग्रहालय अहिले सम्म खुलेको छैन । संग्रहालय नखुल्दाको असर चौतर्फी परेको छ ।
गोरखाको बारेमा जान्ने, बुझ्ने चाहना भएकाहरु कोभिड १९ को प्रभावले संग्रहालय बन्द भएपछि आउन पाएनन् । विद्यार्थी बाहेकका अन्य स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक पनि आउने संग्रहालय बन्द हुँदा राजस्व पनि सुन्य छ । संग्रहालयले भाडामा लगाएको आसपासका पसल बन्द प्रायः छ ।
भिजिटर नआएपछि ब्यापार गर्नेहरु भाडा तिर्न समेत समस्या भएको गुनासो गर्छन । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गरी संचालित होटल पनि यसको मारमा परेका छन् । संग्राहालय बन्द नभएको भए मानिस आउने थिए त ? कोभिड १९ को प्रभावका कारण आउने संभाव भने कम हुन्थ्यो । कोरोनाको असरले सरकारी राजस्व मात्र घटेको छैन, संग्रहालय र यस सँग जोडिएर संचालन भएका ब्यवशाय पनि चौपट भएको छ ।
२०७५/७६ मा झण्डै एक लाख जनाले घुमेको गोरखा संग्रहालय गत वर्ष संख्या घट्यो । यो वर्ष पनि घट्ने पक्का छ ।
कोभिडबाट सुरक्षित हुँदै समान्य जिवनमा नर्फकँदा सम्म मानिसलाई घुम्ने विषय निकै पर छ । यस्ता धार्मीक सम्पदा, संग्रहालय खुलेका बेला सरसफाई गर्ने, वरपर खाली ठाउँमा फुल रोप्ने, सँधै मानिसको चाप हुँदा गर्न नसकिने सुधार र मर्मतका काम यो बेला गर्न सकियो भने कोभिडको प्रभाव हटेपछि आउने भिजिटरको मन लोभिने थियो ।